Fonosana bubble, savony hosodoko sy maro hafa: hevitra 15 ho an'ny sary hosodoko amin'ny ankizy
Ny pejy fandokoana ho an'ny ankizy dia manentana ny saina ary mandrisika ny fizotran'ny famoronana. Mandray soa koa ny fahaiza-moto sy ny saina. Mbola tsy maharary ihany ny karazany vitsivitsy.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita hevitra 15 izay ho tian'ny ankizy ianao, manomboka amin'ny fonosana miboiboika ka hatramin'ny zavakanto andriamby.
Ny kinova voalohany amin'ilay sary hosodoko somary hafa dia mikasika karazana tsindry iray hafa. Miaraka amin'ny fanontana horonan-tsarimihetsika an-habakabaka, ny loko, izany hoe ny haavon'ny boribory amin'ny horonantsary, dia nolokoina niaraka tamin'ny loko rehetra. Tsindrio avy eo amin'ny taratasy na amin'ny fitaovana hafa ny lafiny miloko. Ny sisa tavela dia modely teboka manintona, izay azo ampiasaina hamoronana motif maro.
Ny savony fandokoana dia manambatra lafin-javatra tsara roa: ny fandokoana sy ny fahadiovana. Araka ny lazain'ny anarany dia savony no nolokoina ary manana ny mifanaraka mifanaraka aminy mba hamoronana. Tsy simba amin'ny hoditra ireo akora ireo ary koa amin'ny taila fandroana sy fandroana fandroana. Tsy ilaina ny borosy, fa kosa, apetaka amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny rantsan-tànana ny motera na voaravaka amin'ny atin'ny fonao ny fandroana.
Ary ny vokany azo ampiharina: madio sy milalao ny zaza. Aorian'ny fandroana dia azo esorina ny savony nefa tsy misy sisa tavela. Ao amin'ny pejy torohevitra https://www.spielzeug.org/malseife/ azonao atao ny mahazo topy maso momba ny savony amin'ny savony. Ny vavahadin-tserasera dia nandamina ny vokatra avy amin'ny mpanamboatra sy ny fampahalalana bebe kokoa.
Teknika mitsoka amin'ny mololo
Betsaka ny ray aman-dreny eo aminao no mety mahalala an'io variant io. Teknika tsotra mitsoka no ampiasaina eto: apetaho tsotra fotsiny ny takelaka manify amin'ny taratasy ary atsofohy ao anaty mololo araka ny itiavanao azy. Raha eo am-bavan'ny faran'ny iray ny mololo fisotro, ny iray kosa apetraka akaiky araka izay azo atao amin'ireo loko. Avy eo dia mahomby ny fizarana nefa tsy misy olana.
Soso-kevitra: tapaho eo afovoany ny mololo fisotroana, avy eo tsy dia manery intsony ny mitsoka azy!
Dab teknika amin'ny fisotroana mololo
Fa ny mololo dia mety mahavita bebe kokoa aza: Amin'ny fanapahana ny tendrony imbetsaka, dia misy tadiny maromaro noforonina izay mbola azo aforitra. Ny valiny dia borosy namboarina samirery namboarina izay azo apetaka amina taratasy ny motika toa voninkazo. Amin'ny fampifangaroana loko mifanohitra be, noforonina sary lehibe.
Teknika fikosehana amin'ny savoka
Ity koa dia teknika fanta-daza fanta-daza. Voalohany indrindra, ny taratasy dia nolokoina miloko miloko saingy hazavana arak'izay azo atao. Manaraka izany ny sosona faharoa, mandrakotra amin'ny mainty. Amin'ny dingana fahatelo, ny sary an-tsaina dia azo hosodoko amina zavatra somary maranitra (oh: kitapo nify na tapa-taratasy). Tsindry antonony ihany no apetraka mba hanesorana ny sosona mainty ambony ihany ary hampiharihary ny lafika miloko.
Ny rantsan-tananao manokana dia azo ovaina ho borosy ihany koa. Mba hanaovana izany dia atobohy amin'ny loko rano ny ankihiben-tànanao, ny rantsan-tànanao ary ny toy izany ary tsindrio amin'ny taratasy araka izay itiavanao azy. Ny fandokoana sary rantsan-tànana dia mahafinaritra indrindra raha mieritreritra ny tanjona mialoha. Tokony ho vorona ve ny dian-tanana fototra, Balaonina na Atody paska misolo tena? Iza amin'ireo seho no azo eritreretina ary ahoana no fomba fampiasana loko hahatratrarana ireo mifanohitra tadiavina? Raha tsy izany, lokoo ary andraso raha hahitana izay mitranga.
Ity teknika fanaovana pirinty ity dia mitaky instinct azo antoka, nefa mamorona motif manaitra. Ny variant miaraka amin'ny ravina avy amin'ny hazo dia malaza indrindra. Atao ao ambanin'ny taratasy ireo ary apetaka kely. Ny rafitra dia afindra amin'ny pensilihazo na tsaoka. Mba hanaovana izany, ny penina dia tsy maintsy tazonina araka izay azo atao. Tsy maharary izany raha tsy vao nohomboina ny crayons. Ny teknika dia miasa tsara kokoa amin'ny toro-hevitra somary manjavozavo.
Na dia tsy dia mendrika loatra ho an'ny zaza aza ny trano fonenana dia azo antoka fa mahafinaritra azy ireo ny teknikan'ny fanaovana stamping. Zavatra marobe isan-karazany no azo ampiasaina amin'izany. Mijanona miaraka amin'ny ohatry ny natiora: Mety tsara ny ravina hazo, fa tsy tokony ho maina loatra. Raha tsy izany dia miparitaka haingana izy ireo. Borosio amin'ny lafiny iray amin'ny rano na loko ny rantsan-tànana, tsindrio tsara amin'ny taratasy ary esory haingana ilay ravina.
Ny spaonjy dia fanampiny fanampiny azo ampiasaina izay afaka mitondra loko amin'ny taratasy na baoritra. Koa satria misy spaonjy motera, ny teknikan'ny spaonjy dia mamorona zavakanto kanto famoronana. Rahona haingon-trano misy spaonjy miendrika fanaingoana.
Fandokoana amin'ny lovia fanendasana
Ny lamosin'ny lovia fanendahana sasany dia azo ovaina ho stamp amin'ny fotoana fohy mihitsy. Ny hany takiana amin'izany dia ny loko miloko mamirapiratra sy ny borosy ary ny sarisary malala-tanana. Ny lasitra Muffin dia efa voalahatra satria ny bontsina kely dia mety hafa loko, fa ho toy ny fandaminana dia mamorona singa milahatra milamina izy ireo.
Volon'ondry sy landihazo vita amin'ny landihazo
Miaraka amina taratasy taratasy asa-tanana, crayons na watercolors ary koa landy vita amin'ny landihazo sy landy, afaka mamorona zavakanto isan-karazany ianao. Ireo singa misy landihazo dia nopetahana ary nasiana sary hosodoko tamin'ny taratasy. Na faritra mangatsiaka miaraka amina lanezy, sary an-dohataona amin'ny moron-dranomasina na ondry eny amin'ny kijana misy rahona matevina any aoriana: izay tianao dia avela.
Tsy voatery ho taratasy foana izany. Ny vato dia tsara amin'ny famoronana zavatra an-tsaina. Ny fampiasana loko akrilika dia tsara raha maharitra ny hosodoko.
Ny kasety Painter dia miraikitra kely fotsiny ary azo esorina amin'ny taratasy mora foana. Tonga lafatra amin'ny fametahana trano, felam-panala na biby. Raha vantany vao ampiharina amin'ny alàlan'ny kasety hosodoko ny motif, dia nolokoina tamin'ny loko izany. Aorian'ny fanamainana tanteraka, esory ny kasety hosodoko ary ankafizo ny sangan'asa kanto mahavariana! Mampitombo ny vokany ny fifanoherana.
Rafitra misy lakaoly
Na lakaoly mafana na lakaingo fanaovana asa-tanana: ny fampiharana azy amin'ny taratasy misy asa-tanana ary hafafiny amin'ny sira, confetti na zavatra mitovy amin'izany avy hatrany dia mamorona rafitra manaitra. Avelao ho maina tsara!
Ny kesika kesika dia manana endrika tsy mahazatra. Azonao atao ny mampiasa an'io rehefa miloko miaraka amin'ny ankizy. Amin'ny lafiny iray, mora voatazona ny kônitra, ary amin'ny lafiny iray, ny loko matevina dia azo apetaka amin'ny taratasy.
Hamarino tsara fa tsy misy resina ireo kôzy sao mijanona amin'ny fiasco miraikitra ny sary hosodoko!
Afaka mahita hevitra bebe kokoa momba ny sary hosodoko amin'ny ankizy ao amin'ny bilaogy ianao ao amin'ny https://mamakreativ.com.